Otú Ị Ga-esi Kụziere Nwa Gị Ka Ọ Na-erubere Gị Isi | Ihe Ndị Ga-enyere Ezinụlọ Aka
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Xhosa Yoruba Zulu
Unu nwere ike kpebie otú a ga-esi eme ihe, nwa gị emewe ihe ọzọ. Dị ka ihe atụ, unu kpebiri na ọ kụhaala elekere itoolu nke abalị, onye ọ bụla agbanyụọ ekwentị ya. Ma n’izu a, i jidela nwa gị nwaanyị ugboro abụọ ebe ọ na-ezigara ndị enyi ya ozi n’ime ime abalị. Ị gwara nwa gị nwoke ka ọ na-alọta tupu elekere isii nke abalị. Ma, elekere asaa akụọla tupu ya alọta.
Nke bụ́ eziokwu bụ na nwa gị nwere ike ịgbanwe. Ma, tupu anyị ekwuo ihe ga-enyere ya aka, buru ụzọ mara ihe mere o ji enupụrụ gị isi. I nwere ike ịchọpụta na ihe nwa gị na-eme ajọrughị njọ otú i chere.
IHE MERE ỤMỤAKA JI ENUPỤRỤ NNE NA NNA HA ISI
Ọ bụrụ na e meghị ya ihe a sị na a ga-eme ya. Ụmụaka ụfọdụ na-ama ụma eme ihe papa ha ma ọ bụ mama ha sị ha emela. Ihe mere ha ji eme otú ahụ bụ ka ha mara ihe a ga-eme ha. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị gwa nwa gị ihe ị ga-eme ya ma o mee ihe ị sị ya emela, o nwere ike ịga mee ihe ahụ ka ọ mara ma ị̀ ga-eme ya ihe ahụ i kwuru. Nke a ò gosiri na nwa ahụ agaghị agbanweli? Mba. Nke bụ́ eziokwu bụ na nwa gị nwere ike ịna-eme ihe ị sị ya emela ma ọ bụrụ na i meghị ya ihe ị sị na ị ga-eme ya ma o mee ihe ahụ.
Ọ bụrụ na ị naghị ekwe ya megharịa ahụ́. Ndị nne na nna ụfọdụ anaghị ekwe ka ụmụ ha megharịa ahụ́. Ha na-enye ha ọtụtụ iwu. Iwe na-abịa ha mgbe ọ bụla ụmụ ha na-emeghị ihe ha kwuru. Ha na-abịa nyekwuo ha iwu. Ma, nke a na-emekarị ka ihe ka njọ. Otu akwụkwọ kwuru na ọ bụrụ na ọ na-abụ nwatakịrị mee ihe na-adịghị mma, papa ya na mama ya enyekwuo ya iwu, ọ ga-eme ka nwa ahụ na-enupụkwuru ha isi. Ọ na-adị ka ebe mmadụ na-awụ mmiri n’elu okwute.
Ihe ga-enyere gị aka bụ ịgbazi nwa gị mgbe ọ bụla o mehiere ihe. Ịgbazi nwatakịrị dị iche n’ịta ya ahụhụ. Ịgbazi ya pụtara ịkụziri ya ihe. Olee otú ị ga-esi kụziere nwa gị ka ọ na-eme ihe ị sị ya mee?
Hụ na ọ ghọtara ihe ị sị ya mee. I kwesịrị ịgwa nwa gị ihe ị chọrọ ka o mee otú ọ ga-edo ya anya. I kwesịkwara ịgwa ya ihe ị ga-eme ya ma ọ bụrụ na o meghị ihe ahụ.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ndị Galeshia 6:7.
Ihe i nwere ike ime: Dee iwu ndị unu tiri n’ezinụlọ unu n’akwụkwọ. Jụzie onwe gị, sị, ‘Iwu ndị a hà karịrị akarị? M̀ kwesịrị inyekwu ụmụ m iwu? Ò nwere iwu ndị na-abaghịzi uru? Ò nwere iwu nke m nwere ike ileghara anya ebe ọ bụ na ha na-erubere anyị isi?’
Hụ na i mere ya ihe ị sị na ị ga-eme ya. Ọ bụrụ na nwa gị mere ihe ọjọọ n’izu gara aga gị ahapụ ya, ma ya emee otu ihe ahụ n’izu a gị ataa ya ahụhụ, o nwere ike ime ka ọ na-enupụrụ gị isi. Ihe mere o nwere ike iji eme otú ahụ bụ na ọ maghị ma ị̀ ga-eme ya ihe ị sị na ị ga-eme ya.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Matiu 5:37.
Ihe i nwere ike ime: Nwa gị mee ihe ị sị ya emela, taa ya ahụhụ gbasara ihe ahụ o mere. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị gwara ya ka ọ na-alọta n’elekere asaa, ma ya alọta n’elekere asatọ, i nwere ike ịsị ya na-alọtazi n’elekere isii, kama ịsị ya na ọ gaghị eri nri ọ bụla.
Esila ọnwụ na nwa gị ga-eme ihe i kwuru. Ọ bụrụ na nwa gị na-erubere gị isi, i nwere ike ịhapụ ya ka ọ na-eme ihe ụfọdụ ị na-ekwebughị ka ọ na-eme.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ndị Filipaị 4:5.
Ihe i nwere ike ime: Tupu gị enye iwu ụfọdụ n’ezinụlọ, kpọọ nwa gị gwa ya gbasara ya. I nwedịrị ike ịgwa ya ka o kwuo ihe a ga-eme ya ma o mee ihe a sị ya emela. Ọ bụrụ na nwatakịrị anọrọ ya mgbe a na-eti iwu n’ezinụlọ, ọ ga-ara ahụ́ ya enupụ isi n’iwu ahụ.
Nyere ya aka ka ọ na-akpa àgwà ọma. Ọ bụ eziokwu na ị chọrọ ka nwa gị na-erubere gị isi, i kwesịrị inyere ya aka ka o jiri aka ya na-ama ihe bụ́ ihe ọma na ihe ọjọọ. (Gụọ igbe bụ́ “Na-akụziri Nwa Gị Ka Ọ Na-akpa Àgwà Ọma.”)—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: 1 Pita 3:16.
Ihe i nwere ike ime: Jiri Baịbụl nyere ya aka. Ọ na-enye “ịdọ aka ná ntị nke na-enye nghọta.” Ihe e kwuru na ya na-emekwa “ka ndị na-enweghị amamihe nwee amamihe, meekwa ka nwa okorobịa [ma ọ bụ nwa agbọghọbịa] nwee ihe ọmụma na ikike iche echiche.”—Ilu 1:1-4.
“Ka Ee unu kwuru bụrụ Ee, ka Ee e unu kwuru bụrụ Ee e.”—Matiu 5:37.
“Meenụ ka mmadụ niile mara na unu nwere ezi uche.” —Ndị Filipaị 4:5.
NA-AKỤZIRI NWA GỊ KA Ọ NA-AKPA ÀGWÀ ỌMA
Nyere nwa gị aka ka o chebara onwe ya echiche mara ụdị onye o kwesịrị ịbụ. Nwa gị ga na-eme ihe ndị dị mma ma o buru ụzọ jụọ onwe ya ajụjụ ndị a tupu ya emewe ihe ọ bụla ọ chọrọ ime:
Olee ụdị onye m chọrọ ịbụ?—Ndị Kọlọsi 3:10.
Gịnị ka onye na-akpa àgwà ka Kraịst ga-eme ma ụdị ihe a mee?—Ilu 10:1.
Baịbụl kọrọ gbasara ọtụtụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ndị àgwà ha gosiri na ha bụ ezigbo mmadụ. Ọ kọkwara gbasara ndị nke àgwà ha gosiri na ha bụ ndị ọjọọ. (1 Ndị Kọrịnt 10:11; Jems 5:10, 11) Kọọrọ nwa gị gbasara ụfọdụ n’ime ha. Ọ ga-enyere ya aka ịna-akpa àgwà ọma.
Olee otú ị ga-esi kụziere nwa gị ka o jiri aka ya na-amata ihe ndị dị mma na ihe ndị na-adịghị mma?